ချစ်သူများနေ့အမှီ မိတ်ကပ်ဘလော့ကာတွေ ဖန်တီးလိုက်ပြန်တဲ့ အသည်းပုံမိတ်ကပ် – Trend.com.mm
အင်စတာဂရမ်မှာတော့ မိတ်ကပ်ပြင်ဆင်မှုဗီဒီယိုတွေက မျိုးစုံပါပဲ။ ဘယ်လိုပုံစံမျိုးပြင်ဆင်ချင်လဲ.. အချိန်ခါလိုက်ပြင်ဆင်နိုင်မယ့် မိတ်ကပ်ပုံစံတွေအများကြီးရှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ချို့ ဖန်တီးမှုတွေက ထူးခြားဆန်းပြားလွန်းလို့ ခေတ်မှီလွန်းပါတယ်ဆိုတဲ့ လူတွေတောင် လိုက်မမှီဘူး။ တစ်ချို့ ပြင်ဆင်မှုတွေကြတော့လည်း ချစ်စရာလေးတွေ။ လူမျိုးမရွေးလိုက်ပြင်ဆင်နိုင်တယ်။ ကဲ..အခုလည်း ချစ်သူများနေ့အမှီ မိတ်ကပ်ဘလော့ကာတွေ တီထွင်လိုက်တဲ့ အသည်းပုံမိတ်ကပ်လေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
A post shared by @ puermortem_ on Dec 29, 2017 at 11:21pm PST
인스타 구경하다가 넘 예쁘길래 해보깅🙈 실제로 보면 핫핑크섀도우에 쌍커플라인 펄잔뜩있고 립도 쨍하고 볼따구도 하트 대잔치여서 세상 화려한데….. _ 그렇다. 오늘도 안보인다. 그럼 20000…._ 문득 드는 생각은 남들이 불다끄고 핸드폰조명 팡해서 찍어도 나보다 나을 것 같다는 그런 생각….. 안녕…….._ #메이크업 #makeup #แต่งหน้า #メイクアップ #하트메이크업 #하트주근깨 #heartmakeup #heartfreckles
A post shared by 김만담 (@kimmandam) on Jan 6, 2018 at 10:34am PST
그래도 양쪽 다 열띠미 칠했뚜니까 양쪽짜리로 한쟝 더……_ #메이크업 #makeup #แต่งหน้า #メイクアップ #하트메이크업 #하트주근깨 #heartmakeup #heartfreckles _ inspired by @nikita_dragun
A post shared by 김만담 (@kimmandam) on Jan 6, 2018 at 10:37am PST
ကိုရီးယားမီဒီယာတွေကြားမှာ ရေပန်းစားနေပြန်တဲ့ Kim Woo Bin နဲ့ Shin Min Ah တို့ရဲ့ အချစ်ရေး